छोराको विवाहका लागि केटी हेर्न गएका आमा बाबु जब घर फर्किए त्यसपछि जे भयो…… उनीहरु छागा बाट खसे झैँ भए ! – 24updatemedia
छोराको विवाहका लागि केटी हेर्न गएका आमा बाबु जब घर फर्किए त्यसपछि जे भयो…… उनीहरु छागा बाट खसे झैँ भए !
एजेन्सी । आमाबुवा आफ्नो २३ वर्षका छोराको विवाहका लागि केटी हेर्न गएका थिए । तर घरमा भने उनै छोराको अचानक मृत्यु भयो । यो घटना भारतको पानीपतको विद्यानन्द कालोनीमा भएको हो । उनको रहस्यमय मृत्यु भएको हो । शरिरमा ह ति या र को चो ट पनि देखिएका छन् ।
उनको साथी मंगवार साथी भेट्न गएका थिए । उनले नै र ग तले भिजेको अवस्थामा खाटमा देखेका थिए । अनि फोन गरेर युवकका बुवाआमालाई खबर गरिदिए । साथीले छिमेकीमा मृ त कको कान्छो भाइलाई खबर पुगेपछि छोराको विवाहको लागि केटी हेर्न गएका बुवाआमाले घटनावारे खबर पाए ।
तौफिकका छोरा मूल रूपमा यूपीको सहारनपुर जिल्लाको खानपुर गुर्जरका निवासी हुन् । विगत २२ बर्षदेखि उनी पानिपतको चन्दनीबाग थाना क्षेत्रको विद्यानन्द कालोनीमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको साथ थिए। मित्र कुर्बानले भने कि तौफीक र उनी बाबेल रोडमा रहेको चटाई बनाउने कारखानामा काम गर्थे। सोमबार दुबै कारखानामा काम हेर्न गए तर त्यहाँ काम नभएपछि तिनीहरू फर्के। उहाँ राती नौ बजे सम्म तौफीकसँग थिए।
उनले मंगलबार बिहान ४ बजे तौफीकलाई फोन गरेका थिए, तर सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि तिनी निर्माण कार्यमा तौफीकलाई बोलाउन गए, जहाँ उनी खाटमा र ग तको पोखरीमा सु ति रहेका थिए।
२०१२ मा तौफीकका बुबा नोएडामा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो । यस पछि तौफीककी आमा मुर्शिदाले आलीभाजको कान्छो भाईसंग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन् । तर उनले छोराहरुलाई राम्रोसंग राखेका थिए । तौफीक छ बहिनीहरू र भाइहरू मध्ये तेस्रो थिए। तौफिकका कान्छा भाइहरू तउसिफ र तौविद हुन्।
तौफीकका काका र सौतेनी बुवा शौकीनले बताए कि उनी आफ्नी श्रीमती मुर्शिदासँग सोमबार साँझ ६ बजे तउफीकका लागि बेहुली खोज्न आफ्नै गाउँ खानपुर गुर्जर गएका थिए। उनी मंगलबार केटीलाई भेट्न गंगो जानु पर्ने थियो। बिहान कान्छो छोरा तौसेफले फोन गरेर तौफीकको घटनावारे सुनाएपछि उनीहरु त्यसै फर्किएका छन् ।
Previous तीन दिन देशैभर भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
Next खतरनाक मानिएको कालो ढुंसीका बिरामी नेपालमा पनि बढ्दै, कति जना छन् संक्रमित ?